Disneyland Fasax In Paris Inta lagu jiro Jiilaalka Oo Summer | Save A tareenka
Home > Tareenka Safarka Faransiiska > Disneyland Fasax In Paris Inta lagu jiro Jiilaalka Oo Summer
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo(Last Updated On: 24/04/2020)
Disneyland Paris inta badan waa ugu horeysay ee caalami ah Disney Park taageerayaasha badan in ay soo booqdaan. Ma rabtaa in aad in aad ogaato sida in la qorsheeyo ka fasax Disneyland ugu fiican ee Paris lagu jiro xagaaga iyo jiilaalka? Markaas aad yimaadeen meeshii xaq u! Waxay ku taallaa in Marne-la-Vallee, xaafad ka mid ah Paris, Disneyland Paris ku saabsan yahay 45 daqiiqo bartamaha magaalada tareen. oo dhan waxay miciinka waxay ka kooban tahay 7 hotels rasmi Disney Kaapelitalo, dhowr lammaane hotels, ee madadaalada Disney Village iyo shopping degmada, iyo labada beeraha: Parc Disneyland iyo Walt Disney Studios Park. Faraxsanahay in ay soo booqdaan? Halkan waxaan ku wadaagaan qaar ka mid ah our talooyin fiican waayo kulma a jiilaalka maalin ama xagaaga fasaxa ee Disneyland Paris.
DHINACA FIIRO GAAR AH:
Haddii aad booqanaya Europe ayaa markii ugu horeysay, sababta aan u aragto liiska of our waxa aadan ka maqnaan karin haddii aad booqanaya Yurub: HALKAN
News Recent About Fasax Disneyland in Paris lagu guda jiro qabowga iyo Summer
Disneyland Paris ayaa doonaya fantastic! Tani waa hage ku saabsan sida in la qorsheeyo ka fasax Disneyland ugu fiican ee Paris lagu jiro xagaaga iyo jiilaalka, laakiin waxaa si daacad ah la yaab leh in kasta xilli. Recently, u refurbishments ballaaran ka hor sanad guurada Disney Paris mahad, badan ee park ee la soo celiyay ay quruxda asalka ah. dabaal laftiisa ayaa soo afjaray, laakiin waxaa wali war wanaagsan. Inta badan madadaalada cusub degganyahay! Yay! Waxa kale oo la sii kaabaya doonaa Halloween iyo madadaalada Christmas ilaa dhammaadka sannadka.
Haddii aad ku fekereyso, booqashada hore ee 2019, ka warkii dhacdo Force Star Wars waxay kuorodaa January 12 si March 17, 2019, iyo burcad badeed ah & Marwooyin Festival dhici doona January 19 si March 17, 2019. Ka dib markii in, Xilliga la yaabin of Super-Heroes ordi doonaa ka March 23 in June 16, 2019, iyo Libaaxa King iyo Jungle Festival dhici doono July illaa September 2019, raacay by Halloween iyo Christmas xilli.
Lyon Airport ilaa Disneyland Marne-la-Vallee Tareenka
MARKA AAD SOO BOOQAN WAA DISNEYLAND PARIS?
Haddii aad tahay qorsheeyaha muddo dheer ah oo aad rabto in aad si buuxda diyaar u ah fasax Disneyland in Paris lagu jiro xagaaga iyo jiilaalka, markaas info this ka dhigi doonaa in aad iftiimisid. Disneyland Paris ayaa ku dhawaaqday qorshe muddo dheer ay ku lug la yaabin, Star Wars, barafeeyey oo qayb ka ah a $2.5 billion nooleynta u Walt Disney Studios Park.
Tani dibu dhiska multi-sano ee Walt Disney Studios Park laallaabi doontaa baxay weji ka bilaabanaaya 2021. xataa markaas, waxaa aad u badan tahay in xubno yar Ugu Horeeyay doonaa dhamaadka hore ee kala duwan in. bulk of ballaarinta ka hor Paris ee lagu qabanyo 2024 Summer Olympics.
Hague ayaa si Tareenadu Disneyland Marne-la-Vallee
Maastricht in Tareenadu Disneyland Marne-La-Vallee
Cologne si Tareenadu Disneyland Marne-la-Vallee
Frankfurt inay Tareenadu Disneyland Marne-La-Vallee
The cimilada ee Paris agagaarka March /April, iyo September iyada oo November waa qabow, laakiin waxaan u raaxaysan! Kuwanu waa jeer ugu qoraxda leh ee sannadka, oo inkasta oo ay awooddo baraf ee xilliga qaboobaha, waxaa inta badan aan aad u qabow ee badhtamaha November. (Mid-to-dabayaaqadii December laga yaabaa in riixaya nasiibkaaga, in kastoo.)
Haddii aad ku fekereyso, booqashada hore ee 2019, ka warkii dhacdo Force Star Wars waxay kuorodaa January 12 si March 17, 2019, iyo burcad badeed ah & Marwooyin Festival dhici doona January 19 si March 17, 2019. Ka dib markii in, Xilliga la yaabin of Super-Heroes ordi doonaa ka March 23 in June 16, 2019, iyo Lion King iyo Jungle Dabaaldag dhici doono July illaa September 2019, ku xiga xilli Halloween Christmas iyo.
Haddii aan su'aasha, ugu farxad leh markii si ay u booqdaan Disneyland Paris waa Christmas-xaq hareeraha bartamihii bishii November marka ay bilaabanto. Sida caadiga ah, Disney ee sixray Christmas waddaa ka hore November iyada oo hore January. Waa markii aad u fiican in ay soo booqdaan Disneyland Paris qaar ka mid ah madadaalada xilliyeed dheeraad ah, iyo qurxinta qurux oo dhan ku wareegsan park. Plus, ma waxaad u garaaci karaan dareenka ah City of Paris bilaha fasaxa.
Stuttgart in Tareenadu Disneyland Marne-la-Vallee
Geneva in Tareenadu Disneyland Marne-La-Vallee
Marseille si ay Tareenadu Disneyland Marne-la-Vallee
Luxemburg in Tareenadu Disneyland Marne-La-Vallee
Imisa maalmood EE Fasax Disneyland in Paris lagu guda jiro qabowga iyo Summer?
Haddii aad tahay taageere weyn, ka dibna maalin maalmaha ka mid la iskala. Waxaan rajaynaynaa in aad haysato kabo wanaagsan orodka! Sida habboon, aad rabto in aad 3 maalmood at Disneyland Paris. Waxaa jira wax badan si ay u sahamiyaan ee Parc Disneyland, iyo park waa cajiib ah oo faahfaahsan, sidaas qorsheyneysa on qoondaynta 2 ama 2.5 maalmood park waa bet aad ugu fiican.
Dadka intooda ugu dhammayn kartaa park Walt Disney Studios maalin nus ah, ama maalin. Waxaa jira noocyo kala duwan ah soo jiidashada farxad leh waxaa. Haddii aadan haysan kaliya hal maalin waayo-aragnimo Disneyland Paris, boodi Studios oo kaliya samayn park Disneyland ah.
Winter 2019/2020: Book Hore iyo Save
View All Soo Jeediyay
ka hor Qorsheeyaan oo badbaadiyo, la heli karo ugu wanaagsan on Winter 2019/2020 iyadoo dhowaan yimid ka 7th November 2019 si ay u 1st April 2020. Abaabulaan fasax aad riyo ka hor!
Hel Illaa 25% Off aad Hotel & Park Ticket Xidhmada *
Guddiga Half Free **
dhererka oo dhan aad joogto haddii aad joogtid Hotel Disney ama Disney ee Davy Crockett raraya Xirmada.
Quraac Free iyo Qado ama Casho ***
inta aad laba maalmood Parks Disney haddii aad sii joogo Les Tuulooyinka Nature Paris.
Haddii aad ku talajirto in ay timaado waqti oo kala duwan, fadlan calaamadee dhammaan dalab ay hadda halkan.
THE fuula BEST AT Fasax Disneyland in Paris lagu guda jiro qabowga iyo Summer
Waa tan waxa aan u maleyneyno inaad mudnaanta siiso inta lagu guda jiro booqashada Disneyland Park. Qaar ka mid ah dhawaaqi doonaa yaqaan haddii aad hore u beeraha American, laakiin waxaa jira kala duwanaan sida caadiga ah ku filan (labada kasbay ama bilicsanaanta) si ay u sameeyaan versions Paris ee dareemaan gaar ah. Oo halkan kortaan ugu fiican waa run hal-of-a-nooc jiidashada in mideeya tricks Disney classic leh bewitching story-line cusub.
Amsterdam si Tareenadu Disneyland Marne-la-Vallee
Antwerp in Tareenadu Disneyland Marne-La-Vallee
Rotterdam si Tareenadu Disneyland Marne-la-Vallee
Strasbourg si Tareenadu Disneyland Marne-La-Vallee
10. Indiana Jones et le Temple du biimayno-Indiana Jones iyo guriga aan biimayno
8. Boogani cajiib Alice ee
6. Les Mysteres du Nautilus-qarsoon ee Nautilus ah
5. The Taniere Dragon-The Dragon ee Godku
4. Waa World ah Small
2. Burcad of Caribbean
Ready for Fasax Disneyland in Paris lagu guda jiro qabowga iyo Summer iyo version ugu quruxda badan ee Disneyland ee dunida? U bood on a tababaraan si ay Paris iyadoo la kaashanayo SaveATrain Ma jiraan ajuuro dheeraad ah oo aad u sarreeya, taas oo macnaheedu yahay lacag dheeraad ah raacid! Jartaan tikidhka ah daqiiqo.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/disneyland-vacation-paris/ - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#disneyinsummer #diidmada #DisneyParis disneyland disneywinter europetravel qoyska trainjourney talooyin tareenka travelfrance booqo disney